Muuri News Network » Xog:Beelaha Daarood&Digil iyo mirifle oo caawa siyaasada ugu adkaa kudhex maraayo muqdisho
Xog:Beelaha Daarood&Digil iyo mirifle oo caawa siyaasada ugu adkaa kudhex maraayo muqdisho
Ayadoo maalinimada beri ah magaalada muqdisho kadhici doonto doorashada gudoonka barlamaanka soomaaliya kasoo u taagan musharixiin farabadan kuwaasi oo caawa kujira loolankoodii ugu danbeeyay wallow taageero kala duwan ka helayaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka iyo musharixiinta dooneyso xilka madaxweynaha soomaaliya.
Olalaha ugu xoogan ayaa caawa udhaxeeyo beelaha Daarood iyo waliba beesha Digil iyo mirifle kuwaasi oo wato olalahooda doorashada kii ugu danbeeyay.
Labadaas beelood aya amid waliba wada in gudoonka barlamaanka soomaaliya noqdo waxaana kamid ah madaxweynaha maamul goboleedka koofur galbeed oo wado qorshe gudoomiye barlamaanka oga dhigaayo beesha darood si asaga u noqdo madaxweynaha soomaaliya oo doorasahada usoo istaago.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa caawa olalahooda doorashada ugu danbeeya wada ayagoo damacsan in ku garab siyaan Jawaari in oo noqdo gudoomiyaha barlamaanka soomaaliya madaama oo kasoo jeedo beelaha digil iyo mirifle.
Musharixiin farabadan oo kasoo kala jeedo beelaha ayaa wado qorshayaal oga hortagayaan in ay noqdaan gudoonka marlamaanka soomaaliya waxaana muuqato olale Siyaasadeed oo aad u xoogan caawa muqdisho kawado madaxweyne Shariif Xasan oo damacsan in Cabdirashiid Xidig oga dhigo gudoonka cusub ee barlamaanka soomaaliya.
Musharixiinta iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ku aftirsada beel weynta Hawiye sheeda sare kala socdaan loolanka adag ee caawa kasocda muqdisho balse qudhooda u olaleynayaan in dib usoo laabto Jawari.
Lama saadaalin karo xaalada siyaasadeed ee cawa kasocota muqdisho meesha udhici doonto maalinimada beri ah inkastoo natiijada hor dhaca ah heli doono aroornimada hore ee beri.